ကဗျာနှင့်အိပ်မက်ထဲလမ်းလျှောက်ကျင့်တဲ့ကျွန်တော်: ညီမလေးကို ဖူးဖူးမှုတ်ထားချင်တယ်
တုန်နေ အောင် ချစ်ခဲ့
မှုန်နေ အောင် ချစ်ခဲ့
ညီမ လေးရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်လက်ထပ်စာချုပ်လေး
မျက် ရည်စိမ်ခံလိုက် ရတာလား
ညဉ့်ငှက်တစ်ကောင် ရဲ့အိပ်မက်လို့ 
ညီမ လေးအ ကြောင်းကို
ပိုဆန်းကြယ်တယ် ... ညီမ လေး
ကိုယ့်ကိုမလှုပ် မ ရွေ့
မှင် သက်နေ စေရဲ့
ညီမ လေးကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားချင် တယ်
"ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကော" တဲ့
ရနံ့ကသင်းပျံ့ပျံ့ထွက့် အစိမ်းရောင် အရွက်ဖားဖားနဲ့
ရေမရှိတဲ့အရပ် မစင် လူးသလိုပေါိ့
လ ရောင် ဟာအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပေမယ့်
လမင်းကိုဘယ်သူမှမပိုင်ဘူး ညီမ လေး
လက်ပူ ခြေပူ ခေါင်းပူ ရင် ပူနဲ့
ပန်းတွေလန်းရင် သူ့မျက်နှာရွှင် တယ်
ကိုယ့်တရားနဲ့ကိုယ်နေတဲ့ .. အ မေ
သင်္ခါရဓမ္မက ပန်းဆန်ကောထဲမှာ
ဒီမိုက ရေစီအ ကြောင်းမ လေ့လာသူတွေ
မြန်မာငွေ ဂဏန်းခုနှစ်လုံးတန် လက်ကိုင်ဖုန်း
ရေကြည်ရာ မြက်ပေါက်စေချင် သူ
လေးနက်တယ် နက် ရှိုင်းတယ်
သိမ်မွေ့တယ် ကျယ်ပြန်တယ် ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်က "Save The World" ပေါ့
မြေစာပင် တွေက သောကတွင်းထဲမှာ
ညီမ လေးအသိုင်းအဝိုင်းထဲက စကား ကဗျာတစ်ပုဒ်ကရတဲ့စာမူခ
ငွေဝယ်ကျွန်စနစ်လည်းမရှိဘူး ညီမ လေး
ယိုင် နဲ့နေတဲ့ ဥပဒေကိုလည်း
အရင်းရှင် စနစ်ကို ပပျောက်စေသလို
ပျက်သုန်းစေနိုင် တယ်...ညီမ လေး
ဒဏ္ဍာရီပုံပြင် တစ်ပုဒ် ရဲ့
ဂုဏ်နဲ့ဂုဏေးထပ်တူကျ / မကျ
မှင် သက်ငေးမောလို့ . . .
အ ရောင် ထက်
ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ဆွမ်းကျန် ကွမ်းကျန် စားပေါ့
မြေက မြေ ဈေးမကစားတတ်ဘူး
ထုံလာတယ့် အ တွေးတွေကကာလသုံးပါးထဲ
ဆက်ဆွဲကြမယ် ... ညီမ လေး
ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ပြန် ရှာနေတဲ့ ..ငပုန်း..
ဆက်ထိုးနေလေရဲ့ . . . ။